Grab က ၂၀၂၀ အတွင်း GrabFood နှင့် GrabMart ပေါ်ရှိ စားသုံးသူနှင့် အစားအသောက်ပို့ဆောင်သူများအကြား ကောင်းမွန်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ပေးအပ်ခဲ့သည့် မိတ်ဖက်ဆိုင်လုပ်ငန်းများအား ရွေးချယ်ဆုပေးအပ် | Grab MM
Grab က ၂၀၂၀ အတွင်း GrabFood နှင့် GrabMart ပေါ်ရှိ စားသုံးသူနှင့် အစားအသောက်ပို့ဆောင်သူများအကြား ကောင်းမွန်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ပေးအပ်ခဲ့သည့်
ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့ – အရှေ့တောင်အာရှ၏ ထိပ်တန်း နေ့စဉ်သုံး Everyday Everything App တစ်ခုဖြစ်သော Grab သည် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်ကာလအတွင်း စားသုံးသူနှင့် အစားအသောက်ပို့ဆောင်သူများအကြား ကောင်းမွန်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ပေးအပ်ခဲ့သည့် မိတ်ဖက်ဆိုင်လုပ်ငန်းများအား ဆုအမျိုးအစားခေါင်းစဉ် ၁၀ ခုဖြင့် ရွေးချယ်ကာ ဆုပေးအပ်ခဲ့သည်။
ဆုအမျိုးအစား ၁ ဖြစ်သည့် Big Heart Award ကို အမေ့အိမ်စားသောက်ဆိုင်ကလည်းကောင်း၊ ဆုအမျိုးအစား ၂ ဖြစ်သည့် Local Hero Award ကို The District Coffee Lounge က လည်းကောင်း၊5Star Merchant Award ကို Seoul Chicken က လည်းကောင်း၊ Most Loved by Bikers (YGN) ဆုကို Lotteria က လည်းကောင်း၊ Most Loved by Bikers (MDY) ဆုကို SP Bakery ကလည်းကောင်း၊ Green Merchant Award ကို Cafe Salween က လည်းကောင်း၊ COVID-19 Safety Award ကို The Pizza Company က လည်းကောင်း၊ Mandalay Merchant of the Year ဆုကို စန္ဒာမေက လည်းကောင်း၊ Digital Rising Star ဆုကို J Donut နှင့် GrabMart Merchant of the Year ဆုကို Beauty & Me ကလည်းကောင်း အသီးသီး ရရှိခဲ့သည်။
ထိုဆုအမျိုးအစားတိုင်းတွင် သီးသန့်အကဲဖြတ်သတ်မှတ်ချက်များ ရှိပြီး GrabFood အစားအသောက်ပို့ဆောင်သူများအား အစားအစာအော်ဒါ စောင့်ဆိုင်းနေချိန်အတွင်း နားနေစရာနှင့် အဆာပြေစားစရာများ ပြင်ဆင်ပံ့ပိုးပေးလေ့ရှိသည့်အတွက် Big Heart Award ဆုကို ရရှိသွားသည့် အမေ့အိမ်စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဒေါ်ချိုချိုက “ မေတ္တာပေးလို့ မေတ္တာပြန်ရတယ်လို့ အရမ်းပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ GrabFood စက်ဘီးသမားလေးတွေ အစားအသောက်အော်ဒါလာယူတိုင်း နားနေဖို့ နေရာနဲ့ အချိန်အခါအလိုက် အအေးဖြင့် အအေး၊ စားစရာဖြင့် စားစရာ အမြဲ ပြင်ပေးခဲ့တာ၊ သူတို့လေးတွေကို ကိုယ့်သားသမီးတွေလိုပဲ သဘောထားပြီး ဂရုတစိုက်ဆက်ဆံပေးခဲ့တာရဲ့ အကျိုးလို့ မြင်ပါတယ်” ဟု ပြောပြသည်။ အမေ့အိမ်စားသောက်ဆိုင်သည် GrabFood ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လခန့်က စတင်ချိတ်ဆက်ရောင်းချခဲ့ပြီး Grab အက်ပလီကေးရှင်းအတွင်း GrabFood စာမျက်နှာပေါ်ရှိ Local Heroes ဆိုင်အုပ်စုများထဲမှ တစ်ဆိုင်အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
GrabFood ဝန်ဆောင်မှုကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၌ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး လအနည်းငယ်အကြာ မန္တလေးမြို့တွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၌ စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ ယနေ့အချိန်အထိ GrabFood မှ မိတ်ဖက်စားသောက်ဆိုင်ပေါင်း (၁,၅၀၀) ကျော်အား အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် ပြောင်းလဲရောင်းချနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ဆိုင်ကို ပိုမို လူသိများလာစေရန် ပံ့ပိုးပေးမည့် Grab ၏ နည်းပညာပလက်ဖောင်းနှင့် နည်းပညာအကူအညီများကို တိုက်ရိုက် ရယူအသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်အတွင်း GrabFood မိတ်ဖက်စား သောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်များအတွက် အစားအသောက်အော်ဒါ အရေအတွက်ပေါင်း ပျမ်းမျှ (၄၀%) ခန့် တိုးပွားလာစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့သည့်အပြင် GrabFood မှ ပြည်တွင်းရှိ အကြီးဆုံး မြို့ကြီး နှစ်မြို့အတွင်း ရာပေါင်းများစွာသော မိတ်ဖက်အစားအသောက် ပို့ဆောင်သူများအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၆ လတာအတွင်း အစားအသောက်မှာယူသူများ၏ အကောင်းဆုံးသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် အတူ ရောင်းအားအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့သည့် Local Hero Award ကို ရရှိသွားသည့် The District Coffee Lounge ၏ ဆိုင်တာဝန်ခံဖြစ်သူ မအိအိဝင်းက “ဒီလိုရောင်းအားမြင့်တက်လာတာဟာ ကျွန်မတို့လို local စားသောက်ဆိုင်တွေအတွက် GrabFood က ပြုလုပ်ပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ Local Heroes ကမ်ပိန်းတွေနဲ့ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်တွေကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။ ဆိုင်ရဲ့ စုစုပေါင်းရောင်းအားရဲ့ ထက်ဝက်လောက်က GrabFood အမှာအော်ဒါတွေဆီက လာတာပါ။ ဆိုင်အနေနဲ့ကတော့ စားသုံးသူတွေ ကျေနပ်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ဆိုင်က အစားအသောက်ပစ္စည်းတွေကို အမြဲ စုံလင်အောင်၊ မှာလိုက်တဲ့အခါ မရှိဘူးဆိုတာမျိုး မဖြစ်ရအောင် ပြင်ဆင်ထားသလို GrabFood အော်ဒါပို့ပေးတဲ့ စက်ဘီးသမားတွေရဲ့ မြန်ဆန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကလည်း ကျွန်မတို့ရဲ့ အစားအသောက်တွေကို ပူပူနွေးနွေး အရသာမပျက်စေဘဲ စားသုံးသူတွေ လက်ထဲ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တာမို့ စားသုံးသူကျေနပ်မှုရပြီး rating ကောင်းကောင်း ပေးကြတာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်” ဟု ဆိုပါသည်။
ဆုအမျိုးအစား ၁၀ ခုအနက် GrabFood အစားအသောက်ပို့ဆောင်ပေးသူများ နှစ်ခြိုက်သဘောကျစွာ မဲပေးရွေးချယ်မှုဖြင့် Most Loved by Bikers ( YGN) ကို ရရှိသွားသည့် Lotteria ၏ မန်နေဂျာ မကျင့်ရှင့်နှဲမ်က အစားအသောက်ပို့ဆောင်သူများနှင့် ကောင်းမွန်သည့်ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ထားကြောင်း၊ အော်ဒါစောင့်ဆိုင်းချိန်ကိုလည်း တတ်နိုင်သမျှ နည်းအောင် ပြင်ဆင်ပေးပြီး အကြောင်းကိစ္စကြုံလာပါကလည်း ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပြီးအတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြကြောင်း ပြောပြသည်။
“ပစ္စည်းပို့ပေးတဲ့ Biker တွေရဲ့ ပံ့ပိုးမှုကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ သူတို့က ကျွန်မတို့လို ရောင်းချသူတွေနဲ့ ဝယ်ယူသူတွေကြား မရှိမဖြစ် တံတားလည်း ဟုတ်တယ်၊ မျက်နှာစာဆိုလည်း ဟုတ်ပါတယ်။ သူတို့နဲ့ အဆင်မပြေရင် ဝယ်တဲ့သူတွေကလည်း မှာကြမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေ။ အခုလို ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ရောင်းသူ ဝယ်သူ တွေ့ဆုံလို့ မရတဲ့အချိန်တွေမှာ ပိုသိသာပါတယ်” ဟု GrabMart Merchant of the Year ဆုရှင် မကေဇင်ဖြိုးဝင်းက ဆိုသည်။
“ကျွန်တော်တို့ Grab အနေနဲ့ မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းတွေအတွက် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကျိုးရှိပြီး လူမှုဘဝတွေကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေဖို့ အမြဲ အလေးထားလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ဒါအ့ပြင် အခုလို စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ကာလမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ GrabFood မိတ်ဖက်အစားအသောက် ပို့ဆောင်သူတွေအတွက် ဝင်ငွေ ရှာဖွေနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ပံ့ပိုးပေးနိုင်လို့ ဝမ်းသာကျေနပ်မိပါတယ်။ အစားအသောက်တွေကို မှာယူသူတွေဆီ အရောက်ပို့ဆောင်ပေးဖို့၊ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးဖို့ ကြိုးစားနေကြတဲ့ သူတို့ရဲ့ အားထုတ်မှုတွေကို ကျွန်တော်တို့သာမက သူတို့နဲ့ လက်တွဲလုပ်ကိုင်နေတဲ့ မိတ်ဖက်စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေကပါ အသိအမှတ်ပြုကြတာကို ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်” ဟု Head of GrabFood Myanmar ဖြစ်သူ ကိုမြတ်ကောင်းမင်း က ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ကြုံတွေ့နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများအကြား အစားအသောက်မှာယူသူ များ စိတ်ချလက်ချမှာယူစားသောက်နိုင်ရေးအတွက် ဆိုင်တွင်း အစားအသောက်ပြင်ဆင်မှု၊ သန့်ရှင်းမှုနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း နှာခေါင်းစည်းမျက်နှာဖုံးတပ်ခြင်း၊ ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်း၊ လက်ကို မကြာခဏဆေးကြောသန့်စင်ခြင်းနှင့် အချင်းချင်းထိတွေ့မှုနည်းစေရန် ရှိသင့်သည့်အကွာအဝေးများကို သတ်မှတ်ပြီး အစားအသောက်ပြင်ဆင်စီစဉ်ပေးသူနှင့် အော်ဒါလာယူသူ အစားအသောက်ပို့ဆောင်သူများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်စေခြင်းတို့ကို အလေးထားပြသနိုင်ခဲ့သည့် COVID-19 Safety Award ပိုင်ရှင် ThePizza Company နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် သက်ရောက်မှုများကို မိမိတတ်နိုင်သည့်အပိုင်းမှ လိုက်နာဆောင်ရွက်ကာ စက္ကူပါကင်များကို အသုံးပြုသည့် Green Merchant Award ရရှိသွားသော Cafe Salween စားသောက်ဆိုင်တို့ကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်း ကိုမြတ်ကောင်းမင်းက ပြောသွားခဲ့သည်။
COVID-19 Safety Award
Green Merchant Award
Mandalay Merchant of the Year
စန္ဒာမေ (၇၉ လမ်း)
Most Loved by Bikers (MDY)
Most Loved by Bikers (YGN)
GrabMart Merchant of the Year
Beauty & Me (Korea Skin Care)
5-Stars Merchant (rated by GrabFood customers)
Seoul Chicken (စမ်းချောင်း)
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ GrabFood မိတ်ဖက်အစားအသောက်ပို့ဆောင်သူတွေအတွက် နားနေစရာနဲ့ အဆာပြေအစားအသောက်တွေ တည်ခင်းပံ့ပိုးပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း Big Heart Award ကို ပိုင်ဆိုင်သွားသူကတော့ အမေ့အိမ် စားသောက်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ “မေတ္တာပေးရင် မေတ္တာပြန်ရတယ်” ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့ အမေ့အိမ် စားသောက်ဆိုင်ဟာ သူ့ဆိုင်မှာ အစားအသောက်အော်ဒါလာယူတဲ့ GrabFood အစားအသောက်ပို့ဆောင်သူ စက်ဘီးသမားတွေအပေါ် သားသမီးကဲ့သို့ သဘောထားပြီး ဂရုတစိုက် ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့တာပါ။ အော်ဒါပြင်ဆင်နေချိန်မှာလည်း စက်ဘီးသမားတွေအတွက် နားနားနေနေ စောင့်ဆိုင်းနိုင်ဖို့ နေရာအပြင်၊ အချိန်နာရီအလိုက် အအေး၊ ကော်ဖီ၊ မုန့်၊ ဟင်းအရန် စသဖြင့် ပြင်ဆင်ကျွေးမွေးလေ့ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် GrabFood မိတ်ဖက်အစားအသောက်ပို့ဆောင်သူတွေရဲ့ မေတ္တာကို ပြန်လည်ရရှိပြီး သူတို့တွေရဲ့ အကြံပြုချက်တွေအရ ဒီ Big Heart Award ကို ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ “အမေ့အိမ်" ကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း Local Hero Award ကို ပိုင်ဆိုင်သွားသူကတော့ The District Coffee Lounge ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆုကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၆ လတာအတွင်း GrabFood ပလက်ဖောင်းပေါ်က Local Heroes တွေထဲက ရောင်းအားအမြင့်ဆုံးနဲ့ အစားအသောက်မှာယူသူတွေရဲ့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အကောင်းဆုံးတွေ ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ The District Coffee Lounge ရဲ့ team leader မအိအိဝင်းကတော့ ဒီလိုရောင်းအားမြင့်တက်လာတာဟာ GrabFood က ပြုလုပ်ပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ Local Heroes ကမ်ပိန်တွေနဲ့ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်တွေကြောင့်လည်း ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆိုင်ရဲ့ စုစုပေါင်းရောင်းအားရဲ့ ထက်ဝက်ခန့်က GrabFood အမှာအော်ဒါတွေဆီက လာတာပါတဲ့။ “ စားသုံးသူတွေ အကြိုက်ဖြစ်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ဆိုင်က အစားအသောက်ပစ္စည်းတွေကို အမြဲ စုံလင်အောင်၊ မှာတိုင်း မရှိဘူးဆိုတာ မရှိရအောင် လုပ်ပေးထားသလို GrabFood အော်ဒါပို့ပေးတဲ့ စက်ဘီးသမားတွေရဲ့ မြန်ဆန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကလည်း ကျွန်မတို့ရဲ့ အစားအသောက်တွေကို ပူပူနွေးနွေး အရသာမပျက်စေဘဲ စားသုံးသူတွေ လက်ထဲ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တာမို့ စားသုံးသူကျေနပ်မှုရစေတဲ့အချက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်” ။ “ကွန်ကရက်ကျူလေးရှင်း.. The District Coffee Lounge team…”
“ GrabFood အသုံးပြုသူတွေအတွက် ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာ စိတ်ချလက်ချ မှာယူစားသောက်နိုင်ဖို့ ဂရုစိုက်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်” ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း COVID-19 Safety Award ကို ပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့ မိတ်ဖက်ဆိုင်ကတော့ The Pizza Company ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ COVID-19 ကာလအတွင်း သူ့ရဲ့ ဆိုင်ခွဲအားလုံးမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ချမှတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီ ဆိုင်အတွင်းပိုင်း အစားအသောက်ပြင်ဆင်သူတွေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသူတွေအားလုံးအပါအဝင် အစားအသောက် အော်ဒါပို့ဆောင်သူအားလုံးအတွက် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု၊ အပူချိန် တိုင်းတာခြင်း၊ စနစ်တကျ လက်ဆေးကြောခြင်း၊ လူအချင်းချင်း ထိတွေ့မှု နည်းဖို့ လိုအပ်တဲ့အကွာအဝေးတွေ ထားရှိသတ်မှတ်ပေးထားခြင်းတို့နဲ့ လေးလေးနက်နက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း GrabFood က ဒီဆုကို ပေးအပ်ခဲ့တာပါ။ The Pizza Company ရဲ့ management trainee ကိုကောင်းမြတ်သူက ဆိုင်ရဲ့ ချမှတ်တဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို တလေးတစား လိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ သူ့ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ အစားအသောက်ပို့ဆောင်သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ GrabFood ပလက်ဖောင်းပေါ်က မှာယူတဲ့ စားသုံးသူတွေကိုလည်း စိတ်ချလက်ချ မှာယူကြဖို့ ပြောသွားပါတယ်။ "ကွန်ကရက်ကျူလေးရှင်း.. The Pizza Company!!
“ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်” “ကွန်ကရက်ကျူလေးရှင်း.. Cafe Salween …”
Mandalay Merchant of the Year 2020 ကို ရောင်းအားအကောင်းဆုံးနဲ့ ရရှိသွားတဲ့စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းကတော့ စန္ဒာမေ စားသောက်ဆိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်ကတည်းက တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ခုဆိုရင် မန္တလေးမြို့မှာ ၆ ဆိုင်၊ ရန်ကုန်မှာ ၂ ဆိုင်နဲ့ ပြင်ဦးလွင်မှာ ၁ ဆိုင် ဖွင့်ထားပြီး ဖြစ်သလို မန္တလေးမြို့နဲ့ စန္ဒာမေ တွဲဖက်ပြီး လူသိများတဲ့ အချက်က သူ့အတွက် ဂုဏ်ယူရတဲ့အချက်ပါလို့ မန္တလေး စန္ဒာမေ (79) ကို ဦးစီးနေတဲ့ မခိုင်စန္ဒာလင်း က ဆိုပါတယ်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလက GrabFood ပလက်ဖောင်းနဲ့ စတင်ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး စန္ဒာမေရဲ့ အစားအသောက်အမယ်တွေရဲ့ ကွာလတီနဲ့ GrabFood အစားအသောက်ပို့ဆောင်သူ‌ Biker တွေရဲ့ ပံ့ပိုးမှုတို့ကြောင့် အခုလို ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာလည်း ရောင်းအားကောင်းတာလို့ ဆိုပါတယ်။ “ကွန်ကရက်ကျူလေးရှင်း.. Sandar May…”
2020 အတွင်း GrabMart ပလက်ဖောင်းပေါ်ရှိ ဆိုင်တွေထဲကမှ Beauty & Me က GrabMart of the Year ဆုကို ရောင်းအားအကောင်းဆုံးနဲ့ ရရှိသွားတာပါ။ “ ရောင်းအားကောင်းတယ်ဆိုတာက GrabMart ရဲ့ Delivery Service ကြောင့်လို့ ထင်ပါတယ်။ ပစ္စည်းက မှာလိုက်တာနဲ့ နေ့ချင်းအတွင်း ရတာဆိုတော့ တခြားအွန်လိုင်းတွေမှာ ဝယ်ရင် စောင့်ရသလိုမျိုး မစောင့်ရတော့ဘူး။ ဒါက အားသာချက်လို့ ထင်ပါတယ်” လို့ Beauty & Me ဆိုင်ပိုင်ရှင် မကေဇင်ဖြိုးဝင်းက ဆိုပါတယ်။ “ကွန်ကရက်ကျူလေးရှင်း.. Beauty & Me”
GrabFood အော်ဒါပို့ပေးတဲ့ မိတ်ဖက်ပို့ဆောင်သူတွေက Lotteria ကို သူတို့အနှစ်ခြိုက်ဆုံး ဆိုင်အဖြစ် ဝိုင်းဝန်းရွေးချယ်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။ Lotteria ကနေ အစားအသောက်မှာယူသူ များတဲ့အတွက် အော်ဒါပို့ရတဲ့အကြောင်းရေများများရရှိတာ၊ ဆိုင်နဲ့ Delivery Biker တွေကြား ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြေပြစ်တာကြောင့်လို့ ရွေးချယ်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ “Lotteria ဆိုင်အနေနဲ့ သန့်ရှင်းမှု၊ ကွာလတီ နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုအပိုင်းတွေကို အမြဲ ဂရုစိုက်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာလည်း ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေအတိုင်း အသေအချာလိုက်နာပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။ အဓိကအချက်ကတော့ အစားအသောက်ပိုင်းဆိုင်ရာရော ထုပ်ပိုးမှုအပိုင်းမှာပါ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုရှိပြီး သင့်တင့်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ ရွေးချယ်စရာ မီနူးအများအပြားရှိတာအပြင် Delivery Biker တွေက စားသုံးသူတွေဆီ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပေးပို့နိုင်တာကြောင့် Lotteria ကို ပိုမှာယူအားပေးကြတာလို့ ထင်ပါတယ်။ ဆိုင်ဘက်ကလည်း အစားအသောက်အော်ဒါလာယူတဲ့အခါ Delivery Biker တွေအတွက် အချိန်ကြာ စောင့်ဆိုင်းရတာမျိုး မဖြစ်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး အမြန်ဆုံး အော်ဒါပြင်ဆင်ပေးပါတယ်။ အော်ဒါမှာ လိုအပ်ချက်ရှိနေရင်လည်း အဆင်ပြေအောင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးနဲ့ အထူးသဖြင့် သူတို့နဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကို အလေးထား ဆောင်ရွက်ပါတယ်လို့ Lotteria ရဲ့ မန်နေဂျာ မကျင့်ရှင့်နှဲမ်က ပြောပါတယ်။ “ကွန်ကရက်ကျူလေးရှင်း.. LOTTERIA…”
မန္တလေးမြို့က GrabFood အော်ဒါပို့ပေးတဲ့ Delivery Biker တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုနဲ့ SP Bakery ကို သူတို့အနှစ်ခြိုက်ဆုံး ဆိုင်အဖြစ် ဝိုင်းဝန်းရွေးချယ်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။ SP Bakery အနေနဲ့ Customer service ကို အမြဲအလေးထားပြီး ဆိုင်က အစားအသောက်မှာယူသူတွေကိုသာ Customer လို့ သဘောထားတာမဟုတ်ဘဲ အဲဒီ Customer တွေဆီ အစားအသောက်အရောက်ပို့ပေးနေတဲ့ Delivery Biker တွေကိုပါ Customer လို့ သဘောထားပြီး ဝန်ဆောင်မှု ပေးတာပါတဲ့။ SP Bakery နဲ့ Delivery Biker တွေရဲ့အကြား ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ထားနိုင်တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို ခံစားရတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီကိုဗစ်ကာလအတွင်း Delivery Service တွေကို မှီခိုအားကိုးလာတဲ့အချိန်မှာ Customer တွေဆီ အစားအသောက်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ Biker တွေရဲ့ ပံ့ပိုးမှုဟာ တကယ်အရေးပါပါတယ်လို့ SP Bakery ( Mdy)ရဲ့ Retail Manager မဇူးဇူးက ဆိုတာပါ။ Customer တွေ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ဖို့လည်း Customer Service အပြင် ရောင်းချနိုင်တဲ့အမယ်အမျိုးအမည်အသစ်တွေကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေပါတယ်တဲ့။ “ကွန်ကရက်ကျူလေးရှင်း.. SP Bakery…”
“ နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ်ကျော်အောင် လူငယ်တွေရဲ့အကြား ရေပန်းစားနေရာယူခဲ့ရာက ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းပေါ်ကို ရောက်ရှိလာပြီး လူငယ်စားသုံးသူတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ချဲ့ထွင် ရောင်းချနိုင်ခဲ့လို့ ဂုဏ်ယူပါတယ်”” “ကွန်ကရက်ကျူလေးရှင်း.. J'Donuts …”
GrabFood ပလက်ဖောင်းပေါ်ကနေ အစားအသောက်မှာယူသူတွေက ပေးတဲ့5Star Merchant ဆုကို Seoul Chicken ( San Chaung) က ရရှိသွားပါတယ်။ ဘယ်အချက်တွေကြောင့် အစားအသောက်မှာယူတဲ့သူတွေက5Star ပေးကြလဲ၊ ကြည့်ရအောင်။ “ ကျွန်တော်တို့ Seoul Chicken မှာက တခြားကြက်ကြော်ဆိုင်တွေနဲ့ မတူဘဲ Sauce အရသာကို အသားပေးတဲ့ဘက် သွားတယ်။ ဒီက ကြက်ကြော်တွေကို မှာယူရင် မတူညီတဲ့ Sauce အရသာအမျိုးမျိုးကို ရွေးလို့ ရတယ်။ အရသာမှုန့်မှာလည်း အရသာအမျိုးမျိုးရှိတော့ စားချင်တဲ့အရသာကို စားသုံးသူက စိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ ရတယ်။ ဒီ Sauce နဲ့ အရသာမှုန့်တွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မူပိုင်ဖြစ်တော့ တခြားနေရာမှာ ဒီလိုအရသာမျိုးမရနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီ saunce နဲ့အရသာကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်5Star ပေးကြတယ်လို့ မြင်ပါတယ်” လို့ Seoul Chicken က တာဝန်ရှိသူ ကိုစိုင်းက ပြောပါတယ်။ "ကွန်ကရက်ကျူလေးရှင်း.. Seoul Chicken!!
Seoul Chicken ( San Chaung)